ICala Moraig, elinye lamabhishi amahle kakhulu eCosta Blanca | Izindaba Zokuhamba
Luis Martinez | | España, Amabhishi
ICala Moraig ingelinye lamabhishi amahle kakhulu ICosta blanca. Itholakala esifundeni sase-Alicante se- UMarina Alta futhi, ikakhulukazi, kufayela le- UPoble Nou de Benitachell, maphakathi neJávea neMoraira.
Leli doti elincane lesihlabathi esimhlophe namanzi acwebile njenge-crystal livela ngemuva kwensimbi enkulu Puig de la Llorença massif, ewela ogwini olwenza izinto ezinkulu amawa kuze kufike kumamitha ayikhulu ukuphakama phakathi kwawo kunamabhishi amancane, ngokunembile. Uma ufuna ukwazi kabanzi ngeCala Moraig, sikumema ukuthi uqhubeke ufunde.
1 Izinto okufanele uzenze eCala Moraig
1.1 Ama-Cova dels Arcs
1.2 Izindlela zokuhamba izintaba
2 Ungafika kanjani eCala Moraig
3 Indawo ezungeze iCala Moraig
Izinto okufanele uzenze eCala Moraig
Into yokuqala okufanele uyazi ngeCala Moraig ukuthi ikona laso langakwesobunxele yisiko lama-nudist. Kepha, okubaluleke kakhulu yizinto ongazenza uma uvakashela leli bhishi elihle.
Indawo ilungele ukuthi uyijwayeze diving kanye snorkeling. Amawa awela ogwini akha amadwala angenamqondo emanzini lapho kuhlala khona izinhlobo ezahlukene.
Ama-Cova dels Arcs
Phakathi kwalezo zindawo ezinamadwala, ukuheha okuyinhloko kweCala Moraig kugqamile. Imayelana nekholi Ama-Cova dels Arcs, enezimbobo zombili ngaphezulu nangaphansi kwamanzi. Kwakuwumkhiqizo wohlelo lwe-karst drainage olwenziwe ulwandle edwaleni futhi ingxenye yalo enhle yacwiliswa eminyakeni eyizigidi eziyizinkulungwane eziyisithupha edlule.
Kuyaziwa ukuthi ibiyaziwa ngabantu selokhu kufike abahlali bokuqala kule ndawo. Kamuva, yasebenza njengendawo yokuphephela amatilosi, yize izophinde itholakale lapho kulungiswa imisebenzi yomgwaqo oxhumanisa iPoble Nou de Benitachell nezindawo zasemadolobheni.
Ingaphandle lama-Cova dels Arcs akunikeza amakhadi amahle wokushona kwelanga. Futhi, ngaphakathi, ingxenye eyaziwa kakhulu yomhume ibizwa ngokuthi Igumbi lokucwiliswa, futhi ebizwa nge- "Star Window." Ukusuka lapho, ungangena futhi emakamelweni aphansi avulekile axhumana ngqo nolwandle oluvulekile.
Kodwa-ke, ngaphambi kokungena emhumeni kufanele uthathe izinyathelo ezithile zokuqapha. Okokuqala, akumele ukwenze lapho amagagasi ephezulu nolwandle lugeleza ngoba kungadala ukuthi ushaye amatshe. Futhi okwesibili, ubuso bomgodi bushelelezi futhi akunzima ukuwa. Kepha, noma kunjalo, iyi- isimanga semvelo okubuye kubhekwe njengendawo ende kunazo zonke yokuphuma kwamanzi olwandle olwandle kuyo yonke iSpain.
Ngakolunye uhlangothi, ukusuka eCala Moraig kunemizila eminingana yokuhamba izintaba namabhayisikili edlula esiwombeni esishiwo ngenhla sePuig de la Llorença, esibizwa nangokuthi ICumbre del Sol. Gqama phakathi kwabo lowo ohlanganisa u-Abiar noCalistros, edabula emathafeni okulima umvini futhi ikukhombisa ukwakhiwa kwendabuko kwesifunda esibizwa riurau, lapho amagilebhisi ayegcinwa khona. Kuphela endaweni yokuzilibazisa yedolobha lokuqala esishilo.
Kanye nalo mzila, ongawenza kokubili ngezinyawo nangebhayisikili, unayo leyo kaPenya-Segats, okuheha kakhulu okukuyo imibono ekunika yona emigedeni esogwini. Futhi ngokulinganayo, lelo lephutha le-Moraig, enenani eliphakeme lokuma komhlaba. Kepha umzila ozokumangaza kakhulu ucingo Umzila Wamawa, elandela indlela ye-SL-CV 50, emakwe futhi inezindawo zokubuka eziningi.
Ungafika kanjani eCala Moraig
Ukuphela kwendlela yokufika eCala Moraig ukuhamba ngomgwaqo. Kufanele uhambele i- I-CV-737 futhi uthathe ukujika okuholela Idolobha laseCumbre del Sol. Ngemuva kokudlulisa lokhu, uzothola indawo yokupaka engxenyeni engenhla yendawo lapho kuzodingeka upake khona imoto yakho bese wenza enye indlela ngezinyawo. Lokhu akukude kakhulu, yize kubizwa.
Indawo ezungeze iCala Moraig
Ngakolunye uhlangothi, ngemuva kosuku olwandle eCala Moraig, uzophinde ufune ukwazi indawo ezungezile. I- UMarina Alta I-Alicante inamadolobha amahle kakhulu okufanele ukuvakashelwe. Sizokukhombisa okusondele kakhulu ku-cove.
Into yokuqala okufanele sikutshele ngayo ngaleli dolobha ukuthi, endaweni yalo kamasipala, unamanye ama-cove amahle njenge kusuka kumaTestos y by Llebeig. Kepha futhi ikunikeza izikhumbuzo ezithakazelisayo. Phakathi kwalokhu, i- Isonto laseSanta Maria Magdalena, eyakhiwe ngekhulu le-XNUMX ngesitayela se-baroque. Ngaphezu kwalokho, sikweluleka ukuthi ubone i- Umlomo kaJaime Llobell, eyakhiwe ku-XIX.
Kusukela ngasikhathi sinye i- Iholide laseDolobheni futhi indala kakhulu I-Portalet, okwakungelinye lamasango odonga lwangenkathi ephakathi futhi namuhla linikeza ukufinyelela esigcawini sesonto.
Eduze kakhulu neCala Moraig nalo leli dolobha elincane elinabantu abangaba ngu-XNUMX XNUMX elinetheku elihle. Mayelana nezikhumbuzo zayo, i- inqaba, okwakuyindawo yokuqapha yasogwini ukuvikela indawo ekuhlaselweni yi-pirate.
Leli dolobha elincane lingenye yezinconywa kakhulu kule ngxenye yesifundazwe sase-Alicante. Uzomangala ngenani lezikhumbuzo ezikulo. Phakathi kwabo, iqoqo le- izindlu zamakhosi nezigodlo esebenza njengendlunkulu ezikhungweni ze-University of Alicante.
Baqhakambisa futhi Isigodlo soFata baseFranciscan, eyaqala ngo-1645; i Isigodlo seTorres-Orduña, namuhla indlu yamasiko; i Isonto le-Neo-Gothic le-Immaculate Conception futhi, ngaphezu kwakho konke, i Sika, eyadlula ngekhulu le-XNUMX futhi okuyisakhiwo esidala kunazo zonke edolobheni.
ULonja de Benisa
Yidolobha elibaluleke kakhulu endaweni futhi livikelwe yi IMontgó massif, lapho unepaki yemvelo enhle kakhulu. Kulesi sakamuva, ungasondela kufayela le- ECape San Antonio,, enamawa ayo amangalisayo, ekunikeza imibono emangalisayo yeCosta Blanca.
Mayelana nezikhumbuzo zeJávea, kugqame ngaphezu kwazo zonke Isonto laseSan Bartolomé, eyakhiwa ngekhulu le-1931. Ihlanganisa izici zenqaba ngenxa yohlelo lwayo olungunxande nezinsika zayo eziqinile nobungqabavu benkolo bethempeli. Ngaphezu kwalokho, insimbi yayo iyabonakala ezindaweni eziningi esifundeni. Kusukela ngo-XNUMX yisikhumbuzo seNational Artistic.
I- Isonto le-Our Lady of Loreto, ethekwini futhi ophahleni lwayo lufanekisa isicingo somkhumbi. Ngakolunye uhlangothi, uma uya eCape San Antonio, uzothola i- Isigodlo seVirgin of the Angels futhi eziningana imibhoshongo yokubheka lokho kwakulawula ukufika kwepirates.
Ekuphetheni, UCala Moraig Ingenye yamabhishi amahle kakhulu eCosta Blanca yonke. Ikunikeza izimangaliso ezifana ne- Ama-Cova dels Arcs. Kepha futhi amadolobha akule ndawo akufanele ukuvakashelwa. Awufuni ukwazi leli kona le- Isifundazwe sase-Alicante?
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » Ukuphunyuka eYurophu » España » UCala Moraig